Muxuu sameynayey Cristiano Ronaldo markii uu Messi Magaalada Milan ku guddoomayay xalay abaal-marinta FIFA The Best? – Gool FM
Haaruun September 24, 2019
(Milan) 24 Sebt 2019. Xiddiga kooxda Juventus iyo xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaan xalay ka soo muuqan xafladdii ka dhacday Magaalada Milan ee lagu bixinayey abaal-marinnada FIFA The Best, taasoo dad badan layaab ku noqotay.
Xiddigaha Lionel Messi, Kylian Mbappe, Luka Modric iyo kuwo kale ayaa ka mid ahaa ciyaartoyda magaca wayn ee soo xaadiray xafladdii xalay, waxayna saddexaad laacib ku jireen shaxda kooxda sanadka adduunka FIFPro XI.
Yeelkeede, 10 ciyaaryahan ayaa kaliya masraxa soo istaagay, waxaana kaliya tobankaas xiddig magacooda laga sheegay codbaahiyaha, iyadoo Cristiano Ronaldo oo ka mid ahaa kooxda sanadka adduunka aan magaciisa la sheegin.
Markii ay xafladdu soo dhammaatay 10 daqiiqo kaddib, kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay wixii uu qabanayey intii uu ka maqnaa xafladda.
CR7 ayaana taageerayaashiisa 148 milyan ah oo uu ku haysto Instagram-ka la wadaagay sawirka isagoo bug aqrinaya, iyadoo wiilkiisa Cristiano Jr. uu isaguna meel gadaale ka muuqanayey isagoo shaqo guri ama Layli sameynayo.
Sawirka uu soo dhigay Ronaldo waxa uu soo raaciyey qoraal u dhignaa: “Sabarka iyo adkaysigu waa labo astaamood oo kala sooca xirfadlaha iyo hiyaawadlaha, wax waliba oo maanta weyn waxay ku bilowdeen iyagoo yar, wax waliba ma samayn kartid, laakiin samee wax waliba oo aad awoodo si riyadaadu ay kuugu rumowdo, maanka ku haay, habeenka gadaashiisa waxaa ahaaday Waaberi/Subax”
Tani waa markii labaad ee uu Cristiano Ronaldo ka maqnaado xafladda abaal-marinta FIFA The Best, isagoo aan tagin xafladdii sanadkii hore lagu qabtay Magaalada London, markaasoo uu Luka Modric ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka, sidoo kale Lionel Messi ayaa sanadkaas isaguna ka baaqday xafladda, iyadoo labada xiddig lagu dhaleeceeyay maqnaanshaha xafladdaasi.